Europe Countries With The Best Weather | Save A Train
musha > Travel Europe > Europe Countries With The Best Weather
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 10/04/2021)
Putugaro – The 1st on Europe Countries with the Best Weather
Nokuti vaya tataura kunakidzwa 22 ° C Paavhareji panenge yose gore pane ziya kubva pa 35 + ° C madhigirii, Portugal ndiyo 1st musi Europe Countries pamwe Best Weather. Portugal ari semhosva Csb ekunze (izwi iri rinoreva mamiriro ekunze eMediterranean); rudo unozvidzora nyoro dondo Climate, pamwe akaoma yechirimo, uye kunyorova dzechando. Kana uri parwendo nechitima, vasarudze Portugal mumwedzi yezhizha. The Hottest mwedzi muPortugal ndiye July neavhareji tembiricha 24 ° C, uye coldest munhu January pa 12 ° C. Uchaita kubata zvikuru nezuva mushana maawa August. Plus, unogona nguva dzose nhandare Western Europe nechitima nokuti zvakanaka pfungwa, zvisinei mamiriro okunze kunyika uchida kuona.
Zvichida chimwe chezvinhu zvinoshamisa nyika dzokuEurope, Iceland prides yawo mukare fjords, zvisingaperi neemaradhi mitema nharaunda, chando-chena gomo twi, uye zvinoshamisa nemapopoma. Oh, ngatirege kukanganwa zvayo yakakura mazitombo echando, zvitubu zvemvura inopisa uye geysers, uye vamwe friendliest, vanhu munyika! zvisinei, zvinosuruvarisa, nyika iyi Air zviri nomukurumbira wayo nezvimwewo uye bhowa ekunze. Iceland ane anenge 320 mazuva nemvumi pfumbu makore, 215 mazuva mvura, snowstorms, uye blizzards. Hazvina vaya vari kutarisa kuva kuine vacay.
#britian #coldweather #greece #hot #hotweather #iceland #unitedkingdom #mamiriro okunze Travelportugal travelspain